khilaafka madaxda Galmudug oo cirka isku sii shareeray - Muqdisho Online
Home Home khilaafka madaxda Galmudug oo cirka isku sii shareeray
khilaafka madaxda Galmudug oo cirka isku sii shareeray
Khilaafka ka dhex taagan Madaxda ugu sareysa maamulka Galmudug ayaa yeeshay Waji cusub ka dib markii Magaalada Dhuusamareeb Madaxweyne Xaaf iyo Madaxa Xukuumadda ay kaga dhawaaqeen in Muddo Xileedka Madaxda Galmudug uu ka bilaaban doono Heshiiskii 2017-ka lagu saxiixay xarunta Madaxtooyadda.
Arintaan ayaa kusoo beegmeysa xilli Madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in uu dhamaaday Muddo xileedka maamulka Galmudug oo la dhisay Sanadkii 2015-ka.
Madaxweyne Xaaf ayaa inta badan la kulmay Madaxda Dhaqanka Galmudug , waxaana uu sheegay in aysan jirin xildhibaano lasoo xulaayo, Maadaama Midowga Galmudug iyo Ahlusunna ay si rasmi waqtigu uga bilaamay sidii horay loogu ballamay kulankii ka dhacay Madaxtooyadda.
Madaxweye ku xigeenka Galmudug oo arintaasi kasoo horjeedda ayaa ka dhaadhicinta Waxgaradka in doorashadda la aado Bartamaha Sanadkaan ka wadda degmooyinka Caabudwaaq iyo Cadaado.
Khilaafka Madaxda Galmudug ayaa waxaa ka daalay in xaliyo madaxda ugu sareysa dalka, waxaana inta badan dowladda dhexe Kooxda uu hoggaamiyo Xaaf ay ku eedeeyaan Madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug in ay taageerto oo dhaqaallo badan ay ku bixiso.
Previous articlemaxay tahay sababta maalintii labaad ay u xiran yihiin Wadooyinka Muqdisho
Next articleMadaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo Khudbad u jeedinaya labada Gole ee Baarlamaanka Somaliya
(Daawo) Wasiir Khadiija oo maanta arrin halis caafimaad leh ka sammeysay garoonka Muqdisho + Video
NISA oo u kala Saareysa Shaqaalaha Dowladda iyo Ciidamada Qaranka Mucaarid, Taageere NN iyo Dhexdhexaad.
(Daawo) Wasiir Khadiija oo maanta arrin halis caafimaad leh ka sammeysay garoonka Muqdisho +...
Wararka Faysal Ali Axmed (Alteeso) - February 26, 2020
Caro iyo fal-celin kala duwan ayaa ka dhalatay muuqaal lasoo geliyey baraha Internet-ka, kaas oo ay ka soo muuqaneyso wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya...
NISA oo u kala Saareysa Shaqaalaha Dowladda iyo Ciidamada Qaranka Mucaarid, Taageere NN iyo...
Wararka Axmed Geelle - February 26, 2020
Lixdii bilood ee la Soo dhaafay waxaa socday barnaamijyo ay guddiga shaqaalaha rayidka ah lagu khasbay oo loogu magacdaray Barnaamijka hubinta tirakoobka shaqaalaha dawladda....
Wararka Safia Ali Yasin - February 25, 2020
Dowlada Maraykanka oo in mudo ah taageero laablakac ah u haysay Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ugu danbeeyntii soo taabatay darbiga iyada oo ay u...
Madaxtooyada Koonfur Galbeed oo weerar lagu qaday
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - April 25, 2019
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - March 14, 2019